Maloto Antananarivo: mivangongo ny fako, atahorana ny valanaretina | NewsMada
Maloto Antananarivo: mivangongo ny fako, atahorana ny valanaretina
Tsy hay diavina fa feno loto sy fakobe Antananarivo. Tsy mifidy toerana fa izay rehetra aleha manerana ny boriborintany enina, fakobe zavontany avokoa. Maloto ny tanàna.
Izay aleha rehetra, feno fako avokoa. Tsy mifidy na amoron-dalana na anaty tanàna fa mibahana ny arabe ny fako eto Antananarivo. Tsy amin’ny toerana vitsy ihany koa fa saika manerana ny boriborintany rehetra mihitsy. Miharihary ny eny 67ha, Ankazomanga, Antanimena, Anosimpatrana, Andavamamba, Antohomadinika, Isotry, …
Misy ihany ireo toerana vitsy ahitana kamiao maka fako saingy tsy maharaka izany.
Anisan’ny miteraka fitohanan’ny fifamoivoizana mihitsy ny fako amin’ny toerana sasany satria manapaka ny ampahan-dalana ka lasa lalan-tokana raha tokony ho lalana ahafahan’ny fiara roa mifanena.
Tsy hita mandalo ny kamiao mpaka fako efa ho andro maromaro. Miantso ny Samva ny mponina handray andraikitra, satria efa tena misavovona ny fako. Fotoan’ny fahavokaran’ny voankazo rahateo izao ka vao mainka mampitombo ny fako miohatra amin’ny teo aloha.
Maimbo ny tanàna. Sempotra Antananarivo. Maloto ny tanàna. Miraraka any anaty lakandrano avokoa ny ampahany betsaka amin’izany fako mivangongo izany.
Efa fotoan’ny orana isika amin’izao fotoana. Tsy misy ny fanadiovana ny lakandrano. Mampanahy ny fiakaran’ny rano maloto amin’ny faritra iva.
Ahina ny valanaretina
Mampanahy ny mety hisian’ny valanaretina eto Antananarivo raha mitohy ny tsy fakana ny fako. Betsaka ireo trano fivarotana sakafo masaka eny akaikin’ireny tobim-pako ireny. Tsy voafehy ny lalitra ka mitondra mikraoba amin’ireny sakafo masaka ireny. Ny rivotra maloto ateraky ny fakobe koa etsy andaniny. Anjakan’ny voalavo ny tanàna.
Eo koa ireo paompin-drano manakaiky tobim-pako. Rano madio no kasaina tovozina kanefa loto sy fotaka mandrevo ny manodidina.
Anisan’ny mahatonga ny fahasemporan’ny zaza marobe entina any amin’ny tobim-pahasalamana amin’izao fotoana io rivotra maloto ateraky ny fako mientona vokatry ny hafanana midanik’andro io.
Tsy mahasalama ny zaza madinika eto Antananarivo fa misinda any ambanivohitra na any amoron-dranomasina no mahatsara ny fahasalaman’ny ankizy raha ny soso-kevitry ny dokotera.